လူဆိုတာ အရက်စက် အယုတ်မာတတ်ဆုံး သတ္တဝါတွေ မဟုတ်လား။ လူတွေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေကြ တာက ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်းဝါဒပဲ။ လူတွေထက် ဥာဏ်အားနည်းတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေအပေါ်ဆိုရင် လူတွေဟာ ရက်ရက်စက်စက် မွေးမြူ၊ သတ်စား၊ ခိုင်းစားကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ လူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရှက်နေတဲ့ သက်သက်လွတ်စားသူ တစ်ယောက်ရှိတယ်။ လူတွေ အသားစားနေတာ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေအပေါ် လူတွေ ခေါင်းပုံဖြတ် သွေးစုပ်နေတာ၊ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်နေတာကို မကျေမချမ်း ဖြစ်နေတဲ့သူပေါ့။ မကျေမချမ်းဖြစ်ပေမဲ့ သူလည်း ဘာမှ တတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူသွားပြောလည်း ဟိုလူတွေက အရေးစိုက်မှာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီတော့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေမိတာပေါ့။ ပြောလိုက်မှ ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်တွေ ထွက်ပြီး ပိုဆိုးပြကြမှာ၊ “ဘာဖြစ်လဲ။ သူတို့ဘာသာ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေလို့ ငါတို့စားတာ။ ဒီလောက်သနားနေရင် ကျားလှောင်အိမ်ထဲ ဝင်နေလိုက်ပါလား။ မြွေကိုအိမ်ပေါ် ခေါ်တင်ထားပါလား” အဲလို အမုန်းစကားတွေ ထပ်ကြားရမှာပဲ အဖတ်တင်နိုင်သွားနိုင်တယ်လေ။ ပြောလိုက်မှ ဆွပေးသလို ဖြစ်ပြီးတောင် ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်သလိုမို့ နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်မိပြန်ရော။ စိတ်ထဲမှာတော့ ကြေကွဲလို့ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ မရဘူး။ အဲဒီမှာ နတ် ပညာရှိ အုပ်စုဆီက အသံတွေ ထွက်လာတော့တာပဲ။ “မင်းကိုယ်တိုင်က သက်သက်လွတ်သမား ဆိုပေမဲ့... အသားစားသူတွေနဲ့ အစားခံရသူတွေကြားမှာ မင်း... ဘာမှမပြောဘဲ ကြားနေနေတယ်ဆိုရင် မင်းလည်း အသားစားသူပဲ” .... “မင်းဟာ လူဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက်ကောင်တွေ လုပ်တဲ့ ကိစ္စမှာ နှုတ်ဆိတ်နေတယ်။ ဒီတော့ မင်းလည်း အကြမ်းဖက်သမားပဲ” .... “အနည်းဆုံး ကုလသမဂ္ဂလိုတော့ စိုးရိမ်ကြောင်း ကြေညာသင့်တယ်။ အနည်းဆုံး Facebook မှာ profile လေးတော့ ပြောင်းသင့်တယ်”
ဟုတ်သားပဲ။ ဒီတော့ သူ profile လေး ပြောင်းလိုက်တာပေါ့။ နွားလေး အသတ်ခံရတော့မယ့် သနားစရာပုံလေး။ အဲဒီမှာ တချို့ပညာရှိနတ် တွေဆီက အသံတွေ ထွက်လာပြန်ရော။ ဒီကောင်ဟာ “နွားတွေကိုမှ ရွေးသနားတဲ့ကောင်” ဆိုတဲ့ အသံတွေ။ တကယ်တော့ အဲဒီ ပညာရှိ နတ်တွေ ပြောတာလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ မှန်တယ်။ တချို့လူတွေဟာ အဲလို ခွဲခြားခွဲခြား လုပ်နေကျ hypocrite ကောင်တွေလေ။ အဲဒါနဲ့ နောက်တစ်ရက်ကျတော့ ဝက်လေး အသတ်ခံရတော့မယ့် သနားစရာပုံလေးကို ပြောင်းတင်လိုက်တာပေါ့။ အဲဒါလည်း မလွတ်ပါဘူး။ တခြား ပညာရှိနတ်တွေက ပြောပြန်တယ်။ ဒီကောင်ဟာ ဝက်ကိုမှ ရွေးသနားတဲ့ကောင်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ တကယ်စေတနာနဲ့ ပြောင်းတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတွေထဲမှာ စံနှုန်းနှစ်မျိုးနဲ့ကောင်တွေများတော့ သူုပါ သိမ်းကြုံးအပြောခံရတော့တာပေါ့။
တော်ပြီ။ ပရိုဖိုင်းပုံပြောင်းပြီး စာနာပြရတာ စိတ်ရှုပ်စရာ။ counterproductive ဖြစ်နေပြီ။ စာသားတွေနဲ့ပဲ စာနာကြောင်းပြတော့မယ်။ စာသားတွေနဲ့ပဲ တောင်းပန်တော့မယ်လို့ သက်သက်လွတ်သမားလေး တွေးလိုက်တယ်။ သူ့ကိုယ်သူ လူသားတစ်ရပ်လုံးရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက် အသွင်မျိုးဖမ်းပြီး စတိုင်အပြည့်နဲ့ ဒီလိုကလေး ရေးလိုက်တယ်။
“ဒီလူဆိုးတွေဟာ လူနာမည်ခံယူထားပေမဲ့ တကယ်တော့ လူ မဟုတ်သူတွေပါ။ လူစိတ် မရှိသူတွေပါ။ လူဆိုတဲ့ နာမည်ကို ခံပြီး လူ့ကျင့်ဝတ်ကို မလိုက်နာကြတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ မတူပါဘူး”။ အဲလိုကလေး ရေးပြီး တောင်းပန်လိုက်တာပေါ့။ ဟန်ဆောင်တောင်းပန်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်နှစ်ကာကာ တောင်းပန်လိုက်တာ။ စည်းခြားပြလိုက်တာပေါ့။
အဲလိုတောင်းပန်လိုက်တော့ နတ်တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုလေးတွေတော့ ရပါတယ်။ တုံ့ပြန်မှုတွေကတော့ “ဘောပဲ။ မင်းလည်း သူတို့လို လက်နှစ်ဘက်၊ ခြေနှစ်ဘက်နဲ့ လူစကား ပြောနေတဲ့ကောင်ပဲ။ သူတို့လို ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး သူတို့လို နေထိုင်နေတဲ့ကောင်။ မကောင်းတဲ့ ကောင်တွေကို ကိုယ့်အုပ်စုနဲ့ မဆိုင်သလို၊ မကောင်းတဲ့ကောင်တွေဟာ လူမဟုတ်သလိုလို ပြောပြီး... ကိုယ့်အုပ်စုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အကာအကွယ်ပေးနေတာ။ လူတွေဘက်ကနေ ဆင်ခြေဆင်လက် ပေးနေတာ” တဲ့။
ကဲ ... အသားစားတဲ့ လူတွေကြားထဲက၊ အမျိုးမျိုးပြောနေကြတဲ့ နတ်တွေကြားထဲက သက်သက်လွတ်သမားလေး ဘာလုပ်ရမလဲဟင်။
ငါဟာ ကပ္ပတိန် အေးဟက်(ဘ်)
ငါဟာ ဘကြီးအောင်ရဲ့ ဆင်စွယ်ရုပ်လေးကို
ကောင်းကင်ကို (နိုဝင်ဘာ ၁၂) ၂၀၁၅
Labels: My poems, poem about literature
ခက်မလိုလို နဲ့ လွယ်တယ်။
လူမသေဖူးတဲ့ အိမ်က မုန်ညင်းစေ့ထက် ရှားတာတွေ ဆွဲထုတ်ပြပါတဲ့။
ဒုက္ခတွေက လက်ပူးလက်ကြပ် ချရေးလိုက်တယ်။
လင်မယားကိစ္စ အနံ့လိုက်ခံနေတဲ့ အဖွဲ့ထဲက
အကျင့်သီလနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သောနုတ္တရ
ဘုရားသခင်ကို လည်ပြန်လှီးနေတဲ့ IS အဖွဲ့ထဲက
ဂုတ်ကျားလောက် ဦးနှောက်ရှိပြီး ဘေဘီလုံး လောက် နှလုံးသား ရှိတဲ့သူ။
မှော်ရုံတော နဲ့ ခြူးပိုက်ဆံ
၁၉၉၈ လောက်တုန်းက မှော်ရုံတောမှာ မောလှပြီကို အရင်ဖတ်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ခြောက်လလောက်နေတော့ လစန္ဒာနဲ့ ခြူးပိုက်ဆံကို ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မှော်ရုံတော ကို အရင်ဖတ်ထားတာ ဆိုတော့ ခြူးပိုက်ဆံကို ဖတ်ပြီး တမျိုးကြီး ဖြစ်သွားတယ်။ မှော်ရုံတော ထဲမှာက ဂေါ်ဂင်က စိတ်ကူးယဉ်သူရဲကောင်း ဆန်ဆန် ဖြစ်နေပြီး၊ ခြူးပိုက်ဆံထဲမှာကျ (ဂေါ်ဂင်ကို မှီးပြီး ပုံဖော်ထားတဲ့) စထရစ်ကလန် က ရက်စက်တဲ့သူလို ဖြစ်နေတာကိုး။ အဲဒီတုန်းက မှော်ရုံတောကိုပဲ ပိုကြိုက်တယ်။ ခြူးပိုက်ဆံ ကို သိပ်သဘောမကျဘူး။
ဒါပေမဲ့ အခုပြန်တွေးကြည့်တော့ မှော်ရုံတော က ဒရမာတွေများ စာရေးဆရာ ဖန်တီးယူတာတွေများပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သလို၊ အစစ်နဲ့ ပိုဝေးသလို ခံစားရတယ်။ (ဝတ္ထုပေမဲ့) ခြူးပိုက်ဆံက သဘာဝ ပိုကျသလို ခံစားရတယ်။
Labels: Facebook status, စာအုပ်ဝေဖန်ရေး
ဘာသာရေး ဆိုတာ အရက်သမား၊ ဆေးသမား တစ်ယောက်ကိုတောင် ဂုဏ်တက်သွားစေနိုင်တယ်။
ဘာသာရေး အစွန်းရောက်ပြီး ဘာသာရေးနာမည်နဲ့ ဗုံးခွဲနေကြ၊ လူသတ်နေကြတော့....
အရက်သမား တစ်ယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ
“ဟ... ဒီကောင်ကတော့ အရက်လည်း သောက်တယ်ကွ။ ဆေးခြောက်လည်း ရှူတယ်။ ဒါဆို ဒီကောင် ဘာသာရေး အယူမသည်းတဲ့ကောင်ပဲ။ ငါတို့ ကြောက်စရာ မလိုတော့ဘူး” ဆိုပြီးတော့။
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်။ နေရာတကာ ဘုရားအကြောင်း ပြောတတ်တဲ့သူတွေ တွေ့ရင် ခင်ဗျားလည်း ဘုရားသာ တနေပေတော့။ အဆင်မပြေဖို့၊ ဒုက္ခရောက်ဖို့က ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိတယ်။
ခေတ်သစ်အမြင်မှာ၊ လူသားဝါဒီတွေရဲ့ အမြင်မှာ အရက် အလွန်အကျွံ စွဲနေတဲ့လူကမှ တင့်တယ်ဦးမယ်။ ဘာသာရေး အလွန်အကျွံစွဲလမ်းနေတဲ့လူက အမြင်မတင့်တော့ဘူး။
ဘာသာရေး အလွန်အကျွံ စွဲလမ်းမှုဆိုတာ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင် တကယ်ကို ရှက်စရာ။
ကောင်းကင်ကို (အောက်တိုဘာ ၂၂)
မြန်မာနိုင်ငံကို လက်တွေ့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာ တစ်ဖွဲ့ပဲ ရှိတယ်။ ၂၀၁၃ တုန်းက မိတ္ထီလာမှာ ရွက်ဟောင်းကြွေပြီး ရွက်သစ်ဝေမှုတွေ ဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့ပေါ့။
သူတို့ကြောင့် အဆောက်အဦး အဟောင်းတွေ နေရာမှာ အဆောက်အဦးသစ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ အမယ်... သူတို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားက အလှူငွေတွေတောင် မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဝင်လာလိုက်သေးတယ်။ လူတွေလည်း ကောင်းကင်ဘုံတို့ ၊ နတ်ပြည်တို့ကို မြန်မြန်ရောက်ရော။
ကဲ... ရွာစားရေ... မြန်မာပြည် ပြောင်းလဲဖို့၊ ကမ္ဘာမကျေအကြောင်း သီချင်းနဲ့ ပို့။
အနာဂတ်မဲ့ ခံစားချက်တွေ ခဏပျောက်ဖို့
ပုလင်းတွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ဖောက်ခဲ့ရပေါ့။
အခုပုလင်းရဲ့ expire date ကို စစ်ကြည့်လိုက်တော့
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်။
ကိုယ့်အတွင်းစိတ် ငရဲကမ္ဘာကို ရှောင်ဖို့
သိပြီးသား မဲပြာပုဆိုး ရုပ်ရှင်ကို
အတင်း ရင်ခုန်နေရတဲ့ အရသာမျိုး။
ယူနီဖောင်းအသစ်နဲ့ ဘုရားသခင်တွေဆီက ဆုတောင်းကြရ။
သရုပ်ပြသက်သက် တင်းနစ်ပွဲမျိုး မလိုတော့ဘူး။
ခုတော့ ထုံဆေးဆန်ဆန် ထွက်ပေါက်တွေအောက်မှာ
Coma ရနေတဲ့ လူနာ၊
စက်အကူအညီနဲ့ အသက်ဆက်နေရကြောင်း သိဖို့
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မှန်ထ မကြည့်နိုင်ရှာဘူး။
တစ်တိတိနဲ့ ရေရှည် ပျက်စီးနေမယ့်အစား
ကိုယ့်အသင်း ဂိုးပြတ် ရှုံးစေချင်သူတစ်ယောက်။
ကောင်းကင်ကို (၁၆ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၅)
မှတ်ချက်။ ။ သွင်းပစေ = သွင်းပါစေ ကို အသံထွက်အတိုင်း ရေးထားတာပါ။
ရွှေဝါရောင်ဆီကနေ ထွက်လာတဲ့ အတွေး
ရွှေဝါရောင်တုန်းက ခေါင်းဆောင် ဘုန်းကြီးအများစု၊ နောက်လိုက် ဘုန်းကြီး အများစု၊ ပါဝင်ကြတဲ့ လူတွေ အများစုကို ချီးကျူးချင်ပါတယ်။ တကယ် သတ္တိရှိကြ၊ အနစ်နာခံခဲ့ကြ ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ကို လူမျိုး၊ဘာသာပေါင်းစုံ အတူတူ လက်တွဲ တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက တစ်ပိုင်းပါ။ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ နိုင်ငံရေးမှာ အင်အားစုကြီး တစ်ခု အဖြစ် ပါလာတာကို သဘောမကျတော့ဘူး။ ရေရှည်မှာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပဲ ပိုများလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။
သာမန် ဘုန်းကြီး တစ်ပါးချင်း NLD ကို ကြိုက်တာ၊ ကြံ့ဖွံ့ကို ကြိုက်တာမျိုး၊ ဘယ်ပါတီကို ထောက်ခံတယ် ဆိုတာမျိုးကတော့ အပြစ်ပြောစရာ မရှိပါ။ ဝိနည်းတွေ ဘာတွေ အသာထား။ ဒီနိုင်ငံမှာ နေနေတဲ့ အတွက် ဘယ်ပါတီကို ကြိုက်တယ်၊ ဘယ်ပါတီကို မကြိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကတော့ လူတွေမှာရော၊ ဘုန်းကြီးတွေမှာပါ ရှိမှာပါ။ သာမန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက သာမန်သဘောမျိုး ပါတီတစ်ခုခုကို ထောက်ခံတာ၊ မိတ်ဆွေတွေကို “x ပါတီကို မဲပေးကြ၊ y ပါတီကို မဲပေးကြ” ဆိုပြီး မဲဆွယ်တာမျိုးကိုတော့ ဆန့်ကျင်စရာ မရှိပါဘူး။ ခံစားချက်ဆိုတာက ဘယ်သူမှ မကင်းနိုင်ဘူးလေ။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ အင်အားစုကြီးတစ်ခုလို၊ ဦးဝီရသူတို့လို ဝင်ပါတာမျိုးကိုတော့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း အမြင်အရ သဘောမကျတော့ဘူး။ ဒီမိုကရေစီအရေး ဘက်က ဝင်ပါတယ်ဆိုရင်တောင် သဘောမကျတော့ဘူး။
အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တာ ရှိတယ်နော်။ “မန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက သာမန်သဘောမျိုး ပါတီတစ်ခုခုကို ထောက်ခံတာ၊ မိတ်ဆွေတွေကို “x ပါတီကို မဲပေးကြ၊ y ပါတီကို မဲပေးကြ” ဆိုပြီး မဲဆွယ်တာမျိုးကိုတော့ ဆန့်ကျင်စရာ မရှိပါဘူး” လို့။ ဒါပေမဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ အရှိန်အဝါကြီးတဲ့ ဆရာတော်တွေ ဆိုရင်တော့ အဲဒီလိုမျိုးတောင် မပြောသင့်ဘူး။ နာမည်ကြီးသူမို့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတစ်ခုလို သက်ရောက်လာမှာမို့ ပိုပြီး စောင့်ထိန်းသင့်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် secular အနေအထားကို ပျက်ယွင်းစေနိုင်မယ်လို့ ထင်လို့ပါ။ အင်အားစုကြီး တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်... ဝေဖန်ဖို့ဆိုတာက သင်္ကန်းကြီးခံနေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကြီး ခံနေမယ်။ သာမန်လူတွေနဲ့ ဝိတ်မမျှတော့ဘူး။ ဘာသာရေး ဂိုဏ်းကွဲမှုတွေ၊ ဘာသာရေး ဘက်လိုက်မှုတွေလည်း ဖြစ်လာမယ်။
ဒီလိုပဲ ... ဗုဒ္ဓဘာသာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဘာသာက ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးမှာ အင်အားစုကြီးတစ်ခုလို ဝင်မပါတာ ကောင်းတယ်။ ထဲထဲဝင်ဝင် ဝင်မပါတာ ကောင်းတယ်။ တကယ်လို့ ထဲထဲဝင်ဝင် ဝင်ပါချင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီးမှ ဝင်ပါလိုက်ပါ။
စစ်အာဏာရှင်တွေကို အရမ်း မုန်းတီးပေမဲ့ ဘာသာရေး အာဏာရှင်တွေကို ကျွန်တော် ပိုမုန်းပါတယ်။ အီဂျစ်မှာ မူစလင်ဘရားသားဟု(ဒ်) သမ္မတ မော်စီကို ဖြုတ်ချပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေ အာဏာရလာခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ကျွန်တော် လုံးဝ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ဘာသာရေး အလွန်အကျူး စွက်ဖက်လာခဲ့တဲ့
မူစလင်ဘရားသားဟု(ဒ်) ကို ပိုပြီး မကြိုက်ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင်တွေကို မုန်းတာထက်ကို ဘာသာရေး အာဏာရှင်တွေကို မုန်းတာက ပိုပါတယ်။ အာဏာရှင်အများစုကတော့ (စစ်+ဘာသာရေး) အာဏာရှင်တွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မြန်မာက အာဏာရှင်တွေကလည်း အဲလို အာဏာရှင်မျိုးပါ။
ကောင်းကင်ကို (၁၅၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅)
မူပြတော့လည်း တန်ဖိုးပိုတက်သွားတာပေါ့။ ကျန်တာတွေ ခဏမေ့သွားကြပြီး.... ဟင်ခနဲ၊ ဟာခနဲ ဖြစ်ပြီး .... "မလုပ်ပါနဲ့ကွာ၊ တို့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး" ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်လာတော့တာပေါ့။ ဖဲတောင် မကစားရသေးခင် ညစ်တာတွေများနေတာ လူတွေသိကုန်တော့ တန်ဖိုးမဲ့သလို ဖြစ်နေပြီလေ။ ဒီတော့ ကစားပွဲကို တန်ဖိုးမြှင့်ပေးဖို့၊ ပရိုမိုးရှင်း လုပ်ပေးဖို့ လိုလာတာပေါ့။ ဒါကြောင့် တန်ဖိုးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ မူပြလိုက်ရတာ နေမှာ။
တကယ်ကတော့ ကိုယ်တိုင် ကုလားဖန်ထိုး၊ ကိုယ်တိုင် ဖဲချို:ထားသူတွေက... ကစားဖို့ စိတ်အားအထက်သန်ဆုံး သူတွေ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ညစ်ထားတဲ့ ကြားက စိုးရိမ်စိတ် လွန်ကဲပြီး သူတို့ ကြောက်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
ကုလားဖန်ထိုးသူတွေက... တချို့အိမ်တွေ ရေကြီး၊ မြေပြိုနေလို့ ဖဲဝိုင်းကို လာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး စာနာသလိုလို၊ ဘာလိုလိုနဲ့ ကစားပွဲ ရွှေ့ချင်သယောင်ယောင် အမှတ် ဝင်ယူလိုက်ကြချင်သေးတယ်။ မရွှေ့ချင်တဲ့သူတွေကပဲ စာနာစိတ် မရှိသယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်ပေါ့။ ပိုင် သကွာ။
(၁၄ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၅)
သက်ငယ်အလုပ်သမားလည်း မရှိနိုင်တော့ဘူး။ ( မဲဆွယ်ဓာတ်ပုံတွေအရ)
ပြည်တွင်းစစ်လည်း မရှိနိုင်တော့ဘူး။ (ပျားသကာစကားတွေအရ)
ကောင်းကင်ကို (စက်တင်ဘာ ၁၈ – ၂၀၁၅)
မေတ္တာအလှကို ယုံတယ်ဆိုသူတွေ .... မယုံသလို ရန်ထောင်နေကြတဲ့ခေတ်မှာ
ခေတ်ကာလကို မယုံဘူးဆိုသူတွေ .... ယုံသလို ဟန်ဆောင်နေရပါတယ်။
ကောင်းကင်ကို (စက်တင်ဘာ ၁၇ - ၂၀၁၅)
“စောက်သုံးတပြား”မှ မကျတဲ့ယာဉ် = ရွေးကောက်ပွဲ
သက်တံ့ရောင် ပရိုဖိုင်းတချို့ကို မေးချင်တယ်။
Gayတစ်ယောက်ဟာ Gayဘဝမှာတင် ဘုရားအဖြစ် ပွင့်ခွင့်ရှိလား?
Proud to beawoman ဆိုရင်
လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံစဉ်းစားသူ ဖြစ်မနေဘူးလား?
Proud to beaman လို့ ရေးရင် နင်ဘာပြောမလဲ?
နှစ်နှစ်ကာကာ ပါ ပါစ?
တံဆိပ်ကောင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ယူတပ်ထားသူတွေအတွက်
ဒါတွေဟာ Litmus Test ပဲ...
ကောင်းကင်ကို (စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅)
ကျွန်တော်က ကဗျာပုံစံဆန်ဆန် ရေးထားတော့ အချက်အလက်တွေ အကုန် ထည့်ရေးးလို့ မရပါဘူး။ ဘယ်ဟာက ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဆိုချင်တာထက်၊ ဘယ်ဟာက မှန်တယ်လို့ ဆိုချင်တာထက် အတွေးတွေကို ဆွပေးဖို့ပဲ ပိုရည်ရွယ်တာပါ။ လူတိုင်းလက်ခံပြီးသား အယူအဆမျိုးဆို (အပျင်းပြေသဘောကလွဲရင်) အချိန်ကုန်ခံပြီး ဘာလို့ရေးမှာလဲ။ ကိုယ်ရေးတာ ဖတ်လိုက်လို့ ဘာအတွေးသစ်ပေါ်လာမှာလဲ။
ပြီးတော့ ကဗျာလို သဘောအရ အကုန်ထည့်ရေးလို့ မရတော့ (ပထမပိုဒ်မှာ) ဂေးနဲ့ပဲ ဥပမာပေးလိုက်ရတာပါ။ ချဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ဂေးတင်မဟုတ်ဘဲ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ disabled person တွေ လက်ရှိဘဝမှာတင် ဘုရားဖြစ်ခွင့် ရှိမရှိကို လူတွေဟာ စကားလုံးအရတောင်မှ လက်ခံနိုင်စွမ်း ရှိမရှိ၊ စကားလုံးအရတောင် သဘောထားကြီးပေးနိုင်လား၊ ခါးခါးသီးသီးပဲလား ဆိုတာမျိုး အပါအဝင် တွေးလို့ရသလောက် ချဲ့တွေးစေချင်တာပါ။
ဘုရားဆိုတာကိုလည်း ဘုရားလောက်ပဲ မမြင်စေချင်ပါဘူး။ ဘုရားနေရာမှာ တမန်တော်တွေ၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတွေ၊ အထင်ကရ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်...ဥပမာ ဂေးတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ တမန်တော်တွေ၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတွေ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကို လူတွေ (စကားလုံးအရတောင်) ဘယ်လောက် လက်ခံနိုင်စွမ်း ရှိသလဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာဝါဒီ ညာဝါဒီ ခံယူထားသူတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ ပြတ်သားသလဲ ဆိုတာကို အတွေးဆွပေးချင်တာပါ။ သွေးဆူအောင် ဆွပေးချင်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အတွေးဆူအောင် ဆွပေးချင်တာပါ။
ဘုရား ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်
အမျိုးသမီးတွေ ဘုရားဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ကို တချို့ ဆွေးနွေးကြတယ်။ တချို့ကလည်း အမျိုးသမီးတွေ ဘုရားဖြစ်ခွင့် မရှိဘူးဆိုပြီး မကျေမနပ် ညဉ်းညူကြတယ်။ တကယ်တော့ အခုလို ခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေရော၊ အမျိုးသားတွေရော ဘယ်သူမှ (ဘာသာကြီးတွေက) ဘုရားမျိုး၊ တမန်တော်မျိုး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ အလွန်ဆုံးဖြစ်ရင် နတ်လို ဟာတွေလောက်ပဲ ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အိုရှိုးလောက်၊ Sai Baba လောက်၊ ဒလိုင်းလားမားလောက်တော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘုရားတွေ၊ တမန်တော်တွေဟာ ရှေးတုန်းက ပေါ်ခဲ့လို့သာ သိပ်အစစ်ဆေး မခံခဲ့ရတာ။ ဒီခေတ်မှာသာ ပေါ်လာပြီဆိုရင် အများစုက... "ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား၊ ညာနေတာလား၊ စိတ္တဇဖြစ်နေတာလား" စတဲ့ သံသယတွေနဲ့ စစ်ဆေးကြလိမ့်မယ်။ တချို့ကပဲ သူတို့ကို ဘုရားအဖြစ် လက်ခံကြလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အခုလက်ရှိ ဘာသာကြီးတွေကလို အများစုလက်ခံတဲ့ ဘုရားတွေ၊ တမန်တော်တွေ ပေါ်လာဖို့ဆိုတာ ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကို ပြန်ရောက်သွားမှပဲ ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။
ခုခေတ်လူတွေဟာ.... "ရှေးခေတ်တုန်းက တန်ခိုးရှင်တွေ၊ ဘုရားတွေ... မိုးပေါ်ပျံနိုင်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့နိုင်တယ်၊ လူနဲ့ တိရစ္ဆာန်စကားပြောခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့နိုင်တယ်" ဆိုပြီး ဆက်ယုံနေကြသေးပေမဲ့ အခုခေတ်လူတစ်ယောက်ယောက်က သူ မိုးပေါ်ပျံနိုင်တယ်လို့ လာပြောရင်တော့ အများစုက ယုံကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ လိမ်နေတာလို့ ပြောကြလိမ့်မယ်။ အရူးလို့ ပြောကြလိမ့်မယ်။
အစဉ်အဆက်လက်ခံလာမှုကြောင့်သာ ရှေးကအဖြစ်တွေကို ဆက်ယုံနေကြတာ။ ဒီတော့ အခုခေတ်မှာ ဘုရားတွေ၊ တမန်တော်တွေ ပေါ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်တော့ဘူးပေါ့။
အမျိုးသမီးတွေ ဘုရားဖြစ်ဖို့၊ တမန်တော်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောရရင် ... ဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာက လက်ခံမယ့်သူတွေ အုံလိုက်ကျင်းလိုက် လိုတယ်လေ။ လူအများစုက ဘုရားဆိုတာ အမျိုးသားပဲဖြစ်ရမယ်၊ တမန်တော်ဆိုတာ အမျိုးသားပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ လက်ခံထားတဲ့နောက်မှတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘုရားတွေ တမန်တော်တွေ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါတောင် Goddess တွေ ရှိနေပါတယ်။ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ ဘုရားမဖြစ်ရတော့လည်း ဘာအရေးလဲ။ အမျိုးသမီး အိုင်စတိုင်းတို့၊ အမျိုးသမီး စတီဖင်ဟောကင်းတို့ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့။ မဒမ်ကျူရီလို ဖြစ်အောင်လုပ်ခွင့်တော့ ရှိတယ်လေ။ (တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာပေါ့။ မတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ အမျိုးသားတွေရော၊ အမျိုးသမီးတွေရော အဲလောက်ဖြစ်ထွန်းဖို့ ခက်တယ်။)
ဘာသာမဲ့ပြီးမှ... အမျိုးသမီးဘုရား မျှော်တာမျိုး... တခါတလေ တွေ့ရတာလည်း ပြုံးချင်စရာတော့ ကောင်းတယ်။ (အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို ထောက်ပြချင်ကြတာ နေမှာပါ)
ယုံကြည်ချက်ကို အခြေခံကြတဲ့ ဘာသာရေးပါဆိုမှ... လူတွေကတော့ သူတို့ကိုးကွယ်မယ့် ဘုရားတွေ တမန်တွေဟာ အမျိုးသားပဲ ဖြစ်ရမယ်တို့၊ ဘာအမျိုးအနွယ်ပဲ ဖြစ်ရမယ်တို့ ဆိုပြီး သူတို့ဟာသူတို့ သတ်မှတ်ကြမှာပဲလေ။ သူတို့က အဲလိုဖြစ်သင့်တယ်လို့ ယူဆပြီး ကိုးကွယ်ကြတာကိုး။ ကိုယ်က အတင်း သွားပြင်လို့မှ မရတာ။
တကယ်အရေးကြီးတာက ဘုရားဖြစ်ခွင့် မဖြစ်ခွင့်ထက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပညာသင်ခွင့်တွေ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးတွေ ရဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
ကောင်းကင်ကို (၂၇ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၅)
စကားကို လေးလုံးကွဲအောင် မပြောတတ်တာချင်းတူတယ်။
ကျွန်တော်က နောက်ကလူတင်ပြီး စက်ဘီးမစီးတတ်ဘူး။
ကောင်းကင်ကို (သြဂုတ် ၂၁ - ၂၀၁၅)
အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေ ဖတ်ရင်း ကြံဖန် ဂုဏ်ယူခဲ့ရတာတွေပါ။ :D
မတရားမှု တစ်ခုမှာ ကြားနေရင် ဖိနှိပ်သူ ဘက်က ရပ်တည်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲလို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒက်စ်မွန်တူးတူးရဲ့ စကားကို ကိုးကားပြီး ပြောကြတာပါ။ တကယ်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ စကားပါ။ အဲဒီစကားရပ်ကြောင့် လူတွေကို စေ့ဆော်သလိုဖြစ်ပြီး၊ မခံချင်စိတ်ကို ဆွပေးသလိုဖြစ်ပြီး မတရားမှုတွေလည်း နည်းနည်းပါးပါး ပိုလျော့သွားနိုင်တယ်လေ။
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ စကားရပ်ကို သိပ်ကြိုက်တာပေါ့။ နေရာတကာလည်း ဝင်ပါချင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့ မတတ်သာဘူးလို့ယူဆပြီး ကြားနေခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စတွေ ဟိုးအရင်တည်းက အများကြီး။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ဖိနှိပ်သူ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
မိဘတွေက ကလေးကို မတရား ရိုက်တာကို ဒီတိုင်းကြည့်နေခဲ့ရဖူးတယ်။ ဆရာမ က ကျောင်းသားတွေကို မတရားနှိပ်စက်တာကို ဒီတိုင်းကြည့်နေခဲ့ရဖူးတယ်။ ဇနီးမယားက လင်ယောကျာ်းကို ၊ လင်ယောကျာ်းက ဇနီးမယားကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် မတရား ဆော်ပလော်တီးတာကို ဒီတိုင်း ကြည့်နေခဲ့ရဖူးတယ်။
သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်ရင် လူတွေဟာ... မြင့်မြတ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ လူတွေက အစ အများစုက မတရားမှုတွေကို လက်ပိုက်ကြည့်နေကြသူတွေပါ။ တိရစ္ဆာန်တွေကို လူတွေ စားဖို့အတွက် တစ်သက်လုံး အကျဉ်းချထား၊ ခိုင်းထားပြီး နောက်ဆုံးမှာ သတ်စားကြတယ်။ အဲဒါကို တရားမျှတတယ်လို့ ဘယ်လိုသတ်မှတ်နိုင်မှာလဲ။
တရားမျှတမှု ဆိုတာဟာ လူတွေအတွက်ပဲ သီးသန့် လုပ်ထားတဲ့ အရာကြီးလား။ (ဒါလည်း လူတိုင်းအပြည့်အဝ မခံစားရပါဘူး။) လူအချင်းချင်းအတွက်ပဲ သီးသန့်ဖယ်ထားတာကရော တကယ် တရားမျှတမှုကို မြတ်နိုးလို့ ဟုတ်ပါ့မလား။ ဇာတ်တူသူ အချင်းချင်းမို့ (အချင်းချင်းချရင်း မျိုးမတုံးအောင်) သီးသန့်ဖယ်ထားတာများလား။ ဒက်စ်မွန်တူးတူးရဲ့ စကားအရ ဆိုရင်တော့ လူအများစုဟာ ဖိနှိပ်သူတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညှာညှာတာတာနဲ့ ရမည်ရှာကြည့်တော့လည်း နေရာတကာ ဝင်ဖိုက်နေရင် လောကကြီးနဲ့ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေဆင်လက်လေး ကို ရလာတယ်။ ဥပမာ အလုပ်ရှင်က သူ့ကလေးကို မတရားရိုက်နေတာကို ကိုယ်က ဝင်ပြောရင် ကိုယ်ပဲ အလုပ်ပြုတ်သွားမှာပေါ့။ ဆရာမက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို မတရား ရိုက်တာကို ဝင်ပြောရင် ကိုယ်ပါ... အာစရိယ ဂိုဏ်းဝင် ဆရာကို စော်ကားသူလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သတ်မှတ်ခြင်း ခံရနိုင်တယ်။ ကိုယ်က အားသာနေချိန်မှာ ဝင်ပါပေးရတာ လွယ်ပေမဲ့ ကိုယ်က အားနည်းချိန်မှာ ဝင်ပါရင် မူလ နှိပ်စက်ခံရသူကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် မကူညီနိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ်လည်း ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်က တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခေါင်းထဲ စွဲလာပါလေရော။ အချိန်တိုင်းမှာ သတ္တိမှ အလုံအလောက် မရှိခဲ့တာ။
ဒီလိုနဲ့ လူတွေဟာ တစ်ခုခုကို ဝင်ပါတော့မယ် ဆိုရင် ကိုယ့်အင်အားနဲ့ ဖိနှိပ်သူရဲ့ အင်အားကို ချိန်ဆလာရတော့တယ်။ တချို့တွေကတော့ သတ္တိလည်း သိပ်မရှိကြပေမဲ့ ဟန်ဆောင်ကောင်းကြတာပေါ့။ ကိုယ်လျစ်လျူရှုခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ၊ မဆိုင်သလို နေခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဖော့တွေး၊ ဖုံးဖိပြီး ကိုယ်ဝင်ပါတဲ့ ကိစ္စတွေကိုမှ ဇန်းတင်ကြတော့တာပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှ သူရဲကောင်းလို့ မထင်ရင် ဘယ်သူက လာထင်မှာလဲ။ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လိမ်ရတာဟာ အကျိုးအရှိဆုံး ကိစ္စကြီး မဟုတ်လား။
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ အများစု သာမန်လူတွေဟာ အခြေအနေအရ... လုပ်နိုင်စွမ်း သိပ်မရှိကြဘူးကိုး။ မတရားမှု တစ်ခုမှာ ဝင်ပါဖို့ ဆိုတာမှာ အင်အားကို ချိန်ဆလာကြတော့တယ်။ လူတစ်ယောက်ချင်းကို အသာထားပါဦး။ ကမ္ဘာ့ အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံကြီးတွေတောင် သူတို့ဝင်ပါမယ့် နိုင်ငံရဲ့ အင်အားကို တွက်ဆပြီးမှ ဝင်ပါကြတော့တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတို့၊ မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ မတရားမှု တချို့မှာ ဘယ်နိုင်ငံကြီးတွေမှ ထိထိရောက်ရောက်ဝင်မပါကြဘူးလေ။
ဒီလိုနဲ့ “ကြားနေရင် ဖိနှိပ်သူ ဘက်က ရပ်တည်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ” ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဝင်ပါဖို့ တွန့်ဆုတ်နေသူတွေအတွက်တော့ ရပ်တည်ချက် ဓားပြတိုက်ခံရသလို စကားမျိုး ဖြစ်လာပါလေရော။
နောက်ဆုံးတော့... Milgram စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ ကျောင်းသားတွေကို ဗို့အား ၃၀၀ ကျော်နဲ့ shock တိုက်လို့။
ကောင်းကင်ကို (၁၅ သြဂုတ် ၂၀၁၅)